Kulajekii gaarisa ee hadda ka hor ay weerareen dagaalyahanada AL-shabaab oo maanta dib loo furey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Dhacdoyinka Caalamka Kulajekii gaarisa ee hadda ka hor ay weerareen dagaalyahanada AL-shabaab oo maanta...
Kulajekii gaarisa ee hadda ka hor ay weerareen dagaalyahanada AL-shabaab oo maanta dib loo furey.
Ardayda Jaamacadda Gaarisa ee dalka Kenya qaarkood ayaa maanta oo Isniin ah dib u billaabay waxbarashadoodii, kaddib sagaal bilood oo hakad ay ku jirtay waxbarashada Jaamacadda, xilligaasoo xoogag ka tirsan Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Jaamacadda ayna ku dileen 148-arday oo arday u badnaa.
Waxaa si aad ah loo adkeeyay amniga guud ee Jaamacadda, inkastoo ay 20-arday oo keliya ay maanta Waxbarashada billaabeen, Halka bishii Abriil ee sannadkii hore oo ku beegnayd markii weerarku dhacay ay dhiganayeen Jaamacadda Arday kor u dhaafayay 800.
Dareenka Adayda Waxbarashada billaabay;
Ardayda maanta dib u billaabay waxbarashada Jaamacadda Gaarisa ayaa waxay muujiyay dareen isku dhafan, waxayna qaarkood ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay dib u bil-laabaan waxbarashadooda, halka kuwo kalena ay dareen kale muujiyeen.
“Anigu waan ku faraxsanahay dib u furidda Jaamacadda… Maanta waxaan dib u billownay qaadashada casharradeennii koowaad, waxaana jaamacadda dib ugu soo laabannay iyadoo xaaladdu caadi tahay,” ayay tiri Shamza Abdi oo ka mid ah ardayda maanta waxbarashada billaabay.
Iyadoo sii hadlaysa ayay intaa ku dartay. “Waxaa jira xusuus badan oo ay ka mid tahay in arday aan saaxiibbo ahayn ay halkan noloshoodii ku waayeen; laakiin wax kasta oo dhaca noloshu way sii socotaa… Hadda waanu u duceynayaa saaxiibbadeennaas.”
Xoogaggii Al-shabaab ka tirsanaa ee Weeraray Jaamacadda Gaarisa ayaa waxay Araydii u kala saareen Muslim iyo kuwo aan Muslim ahayn, iyagoo laayay Maxiisiyiintii. Waxaana weerarkaas uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee Kenya lagu qaaday tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii safaaradda uu ku leeyahay Mareykanka magaalada Nairobi sannadkii 1998-kii.
Inta badan ardaydii aan Gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya kasoo jeedin ee Weerarkii Jaamacadda ka badbaaday ayaa waxay u wareegeen jaamacado kale oo waxbarashadoodii ay kasii wateen. Laakiinse ardayda maanta Waxarashadooda dib u billaabay ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen magaalo qiyaastii 365-km dhanka waqooyi ka xigta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Ammaanka oo aad loo adkeeyay;
“Runtii waa kuwo naga maqan ardaydii la dilay, aad ayaanna uga xunahay wixii dhacay… shacabka deegaanka ku noolna dhibaato xooggan ayaa soo gaartay,” ayuu yiri Xasan Kune Mire oo intaas raaciyay. “Annaga muhiim ayay noo tahay inaan waxbarashadeennii dib u billowno, waanan sii wadi doonnaa waxbarashadeenna.”
Maamulaha Jaamacadda Gaarisa, Axmed Cusmaan Warfaa oo hadlayay Ttoddobadkii hore markii ay macallimiintu dib ugu soo laabteen Jaamacadda ayaa sheegay in amniga guud ee Jaamacadda la adkeeyay, iyadoo saldhigyo booliis laga sameeyay gudaha Jaamacadda iyo daafaheeda.
“Waxaan jeclaan lahaa inaanu noqonno ciidan, isla markaana xilliyada habeenkii ah aanu baranno sida hubka loo isticmaalo, si aan isaga difaacno cid walba oo na soo weerarta iyo inaan ugu yaraan ka badbaadinno ardaydeenna kuwa doonaya inay dilaan,” ayuu Axmed Warfaa yiri.
Ugu dambeyn, afar ka mid ah xoogaggii Al-shabaab weeraray sanadkii aynu soo dhaafnay Jaamacadda Gaarisa ayaa waxaa dilay ciidanka millateriga dalka Kenya oo gudaha u galay dhismaha Jaamacadda intii uu weerarku socday.
Previous articleIRAN;oo jaamacadda carabtu xiriirkii u jartey isla markaana cambaareyn dusha looga tuurey falkii ay kula kacdey safaarada sacuudiga awgeed.
Next articleMadaxweyne Xasan SHeekh oo manta gaarey magaalo madaxda gobolka SH/dhexe ee Jawhar.